ယူဂန္ဓာအရှေ့ပိုင်းရှိကျေးလက်ဒေသရှိဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ - ကဏ္ study ဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂၀၁၉၉) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ယူဂန်ဒါအရှေ့ပိုင်းကျေးလက်ဒေသတွင်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ - ကဏ္sectionအလိုက်လေ့လာမှု (2019)
Trop Med Int ကျန်းမာရေး။ 2019 နိုဝင်ဘာ 6. Doi: 10.1111 / tmi.13329 ။
Nnakate Bukenya J ကို1, Nakafeero အမ်1, Ssekamatte T က1, Isabirye N ကို1, Guwatudde: D1, Fawzi ဒဗလျူ2.
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရဆယ်ကျော်သက်များသည်လူကြီးဘဝသို့ကူးပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှအချို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများကမြီးကောင်ပေါက်များကိုအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုအပါအ ၀ င်မရည်ရွယ်ဘဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STIs) ကိုဖော်ထုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာယူဂန်ဒါအရှေ့ပိုင်းရှိဆယ်ကျော်သက်များ (အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်အထိ) ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အထများကိုဆန်းစစ်ရန်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ယူဂန္ဓာအရှေ့ပိုင်းရှိ Iganga-Mayuge ကျန်းမာရေးနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးနေရာအတွင်း၌ကျပန်းရွေးချယ်ထားသောဆယ်ကျော်သက်များအကြားမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများကိုစံပြမေးခွန်းပုံစံဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ရေနံစိမ်းနှင့်ချိန်ညှိထားသောပျံ့နှံ့မှုအချိုး (PRR) ကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးသည့်အချက်များအားဖော်ထုတ်ရန် Modified Poisson ဆုတ်ယုတ်မှုပုံစံကို အသုံးပြု၍ ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
လေ့လာခဲ့သောမြီးကောင်ပေါက် ၅၉၈ ယောက်အနက် ၁၀၈ (၁၈.၁%) သည်လိင်ဆက်ဆံဖူးသူ (၂၀) ​​(၁၈.၅%) တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖူးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကျောင်းမှ ၇၆ နှစ် (၁၂.၇%) သည်ကျောင်းမှထွက်လာသောဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်ဆက်ဆံမှုပိုများသည် (PRR = 598, CI = 108-18.1) ။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်လိင်ဆက်ဆံမှုနည်းပါးသည် (PRR 20 (18.5-76)) ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုဖူးသည့်သမိုင်းကြောင်းကိုဆယ်ကျော်သက်များ sexting (PRR = 1.54, CI: 1.14-2.08) နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုခြင်း (PRR = 2.29 Cl: 1.60 - 3.29) နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ (PRR = ၁.၇၆) , Cl: 1.76 - 1.27) ။
သင်တန်းသားအများစုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတက်ကြွမှုမရှိကြောင်း၊ သို့သော်လိင်ဆိုင်ရာနှင့်လိင်တက်ကြွသောဆယ်ကျော်သက်များအတွက်မပါ ၀ င်သင့်သည်။ ဤကဲ့သို့သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများရှိဆယ်ကျော်သက်များအားရည်ရွယ်သည့်အစီအစဉ်များတွင်ပြည့်စုံသောလိင်ပညာရေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များအကြားသန္ဓေတားဆေးဖြန့်ဝေခြင်းတို့ပါ ၀ င်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားလူမှုမီဒီယာများအသုံးပြုခြင်းကိုလမ်းညွှန်ရန်အရေးပေါ်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်သည်။
KEYWORDS: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ ယူဂန်ဒါ၊ sexting; လိင်အလေ့အကျင့်များ၊ ဆာဟာရတောင်ပိုင်းအာဖရိက
Doi: 10.1111 / tmi.13329